सडक संघर्षमा उत्रिएका नेताप्रति करिश्माको आक्रोश – Himshikharnews.com
१० माघ २०७७, शनिबार २१:५५
नेपाली चलचित्रकी नायिका करिश्मा मानन्धरले सडक संघर्षमा आउने राजनीतिक दलहरुप्रति आक्रोश पोखेकी छिन् । उनले कोरोना महामारीका बेलामा जनता मर्कामा पर्दा दलका नेताहरु सडकमा नआएको र अहिले आफ्नो स्वार्थका लागि आएको भन्दै आक्रोश पोखेकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै करिश्माले लेखेकी छिन्,‘जनता मर्कामा पर्दा सडकमा नआउने तर संसद विघटन भएर आफैलाई मर्का परेपछि सडकमा आउने ।’ उनले भिडभाड बढाएर भाषण गर्ने दल र नेतालाई आफूले राम्रो काम गरिरहेको भन्न नसक्ने बताएकी छिन् ।
कोरोना महामारीका बेलामा नेताहरु कुर्सी र पार्टीको झगडामा अलमलिएको विषय समेत उठाएकी छिन् । उनले नेताहरुको समेत चर्को आलोचना गरेकी छिन् ।
करिश्माले लेखेकी छिन्ः
के मैले स्वतन्त्र नागरिकको हैशियतमा मेरा कुरा राख्नै नपाउने हाे त ?
अहिलेकाे राजनीतिले मलाई मात्रै हाेईन, सबैलाई आजित बनाएकाे छ । शिक्षा, स्वास्थ, सिनेमा, उद्याेग, कृषि कुनै पनि क्षेत्र सन्ताेषजनक छैन ।
काेराेना महामारीले गर्दा देश झण्डै ८ महिना जति ठप्प भयाे । अहिले बल्ल बल्ल अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ ।
वितेकाे १० महिनामा भाेकभाेकै पैदल घर हिँडेका नेपालीबारे समाचार पढ्याैँ । उद्याेगी व्यापारीहरु तनावमा फसेको, विरामीहरु उपचार नपाएर मरेको, नेपाली कृषककाे उत्पादनहरुले बजार नपाउने तर विदेशबाट सबै थाेक सजिलै आयात भएर बजार बजार पुग्ने, उखु किसानले उखुकाे मूल्य नपाउने तर राजनीतिक दलहरु जुँगाकाे लडाइँमा मात्रै रमाउने गरेको विकृति देखियाे ।
सरकारकाे पहिलाे प्राथमिकता जनताकाे सुखसुविधा हुनुपर्ने थियाे तर हाम्राे देशमा कुर्सी र पार्टी पार्टी नेता नेता बिचकाे झगडा पहिलाे प्राथमिकता बनेकाे थियाे
त्यहिबिचमा संसद विघटन भयाे । संसद विघटन हुने बितिक्कै सबै राजनीतिक दल सडकमा देखिए । काेराेना महामारी पनि विलाएकाे हाे कि?
जनतालाई मर्का पर्दा सडकमा नआउने तर संसद विघटन भएर आफैँलाई मर्का परेपछि सडकमा आउने, भिडभाड बढाएर भाषण गर्ने दल र नेतालाई म कसरी राम्राे काम गरिरहेका छाै भनेर भनुँ?
राजनीतिक दलहरुकाे कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तन जनपक्षीय छ भनेर कसरी झुट बाेलुँ?
काेराेना महामारी बिच जनताले विभिन्न प्रकारका समस्या भाेगेकाे बेला यिनै राजनीतिक दल यसरी नै सडकमा आई दिएको भए के हुन्थ्यो ? कसले राेक्याे त्यतिखेर उनीहरुलाई?
यी विषयमा मलाई चुप लागेर बस्नु उपयुक्त नलागेर स्टाटस लेखेँ । संविधानले मलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपयोग गरेँ। – रिपोर्टर्सनेपाल डटकमबाट